Salaamanews » Maxaad ka Xusuusataa Kacaankii 21-kii October
Home » Dhaqanka, Warar Maxaad ka Xusuusataa Kacaankii 21-kii October Print - Daabace: SalaamaNews - Oct 21st, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Maalinta caafimaadka aduunka oo laga xusay dunida oo dhanMidowga Afrika oo Soomaaliya ugu hambalyeeyay dastuurka03-dii December 2009 waa maalin murug ku reebtay Soomaalida (Daawo muuqaal)Daawo Sawirada iyoTaariikhda Meles ZenawiTaliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka oo ku dhaawacmay Muqdisho
(Salaamanews)-43-sano ka hor maanta oo kale 21-kii october, waa waqtigii uu talada dalka qabtay hogaamiyihii dowladii militariga aheyd Jen. Maxamed Siyaad Barre, waxaana lagu tilmaamaa maalin taariikh weyn ku leh shacabka Soomaaliyeed.
Maanta oo kale waxaa talada dalka qabsaday kacaankii taariikhda lahaa ee uu madaxda ka ahaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, wuxuuna dalka maamulayay 21-sano ugu danbeynna talada ayuu ka degay 1991-kii.
Madaxweyne Siyaad Barre waxay dadka qaarkood ay ka aaminsanaayeen inuu ahaa “Kali-talis”.
Dadka qaar ayaa Maxamed Siyaad Barre ku tilmaamaya aabihii dalka Soomaaliya isla markaana horumar aysan dalalka Afrikaanka ah gaarin gaarsiiyay waxaana sidoo kale lagu xasuusta awoodii ay laheyd dowladii Maxamed siyaad Barre.
KACAANKII 21-KII OKTOOBAR
Intii u dhexeysay 1960 iyo 1969kii waxaa dalka ka talinayey dawlad rayid ah oo qaab doorasho talada ku heli jirtay, hase yeeshee waxaa jiray xisbiyo aad iyo aad u tira badan oo ku dhisnaa hab qabiil.
Arrintaas waxay dalka geyeysiisay qulub siyaasadeed iyo dabac hannaankii hoggaaminta dalka,Waxay arrintu murugtay markii Okt. 1969kii lagu toogtay Madaxweynihii dalka Mudane Cabdirashiid Cali Sharmaake magaalada Laascaanood.
Jaalle Maxamed Siyaad Barre Madaxweynihii hore ee Soomaaliya
Saraakiishii kacaanka hoggoominaysay waxay taariikhd ku xarriiqeen in Kacaankaan noqdo kii 3aad ee ugu weynaa kacaannadii geyiga Soomaliya ka curtay. waxay muujiyeen firfircooni, waxayna jaangooyeen qorshayaashii siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee dalka wax looga qaban lahaa. Waxay qaadeen ololayaal waxqabad ah oo dhan kasta oo nolosha dadka Soomaaliyeed taabaneysa.Waxaa mudan in la xuso mashaariicdii iskaa-wax-u-qabso oo xubno badan ee dadka S/liyeed ah oo aan hore u lahayn xirfado wax soo-saar lagu tababaray, arrintaan oo door weyn u lahayd dalka. Sidoo kale waxaa dalka laga hirgaliyey mashaariic badan oo dardartay u fulayeen mar Soomaaliya u ekaatay dal ka ruqaansanaya fadhiidnimmadii dunida seddexaad.
Dhallintii firfircoonayd ee kacaanka horseedka ka ahayd waxay isdabajoog ugu baaqayeen himmiladay la doonayeen horumarinta dalka iyo barnaamijyadii hanuuninta dadweyna oo tubtay rabeen ku duwaysay bulshada Soomaaliyeed.
1972 ayaa meel fagaaraha ee dad badani isugu soo baxay waxaa khudbad taariikhi ah ka jeediyay J/lle Max’d S Barre, wuxuu khudbaddiisa ku sheegay in markii ugu horreysay afka Soomaaliga la qoray,laguna qoray xuruufta Laatiinka. Intii uu khudbaddiisa waday ayaa wax dul heehaabay fagaarihii, raxan diyaarado ah oo ka tirsan Ciidanka Cirka Soomaaliyeed oo daadinayey dhambaallo tusaaleynaya sida farta cusub loo qoray.Maalintaas waxay bog cusub u furtay guud ahaan taariikhda Soomaaliyeed, waxayna ahaatay astaan mar walba lagu garan doono wax qabadkii kacaankii libineed iyo sharaf ku lammaansanaan doonta magaca Jalle Siyaad.
Hal sano ka dib, markii uu dhammaaday olalihii weynaa, waxaa dadkii Soomaaliyeed ee in yar wax qori jirtay, mar qura intii badnayd isu rogtay dad wax qori kara, akhriyina kara. Horumarkaas degdegga ah ee la yaabka leh wuxuu ahaan doonaa mid raadkiisu qoyanaado inta qaran Soomaaliyeed jiro. Loogama harin qoristii farta intaase, waxaa la diyaariyey eray bixinta culuumta kale geddisan ee dugsiyada lagu dhigto oo si aad ugu habboon loo habeeyay, waxayna arrintaasi hirgashay ilaa manhajyada dugsiyada sare.
Wuxuu XDS galay dagaallo aad u culus, waxaana caan noqday goobo dagaal sida; Godey iyo Jigjiga oo gaashaan-qaadka Soomaaliyeed ku muujiyey karti dagaaleedkiisa dabiiciga ah iyo tan la bartaba.Waxaa muddo yar ku guuleystay XDS oo xoreeyay badi dalkii Soomaali Galgalbeed, ka dib markuu Axmaarada ku jabiyey goob walbaba.Dagaalkaas waxaa galay qaranka Soomaaliyeed oo idil dawlad iyo dadba.Waxaa mudan in la xuso Suugaantii dagaalka ee sida talantaaliga ah uga baxaysay Radio Muqdisho taas oo aan ka awood yarayn holaca baaruudda. Suugaantuna sideedaba waayihii kacaankay u kobocday si aan hore loo arag, loogana sheekayn.
Jalle Max’d S Barre, wuxuu dhammaadkii magan u noqday Nigeria, oo si wacan loogu marti galiyey ilaa uu ku geeriyooday magaalada Laagoos Jan 2, 1995. Gadaashi Soomaaliya waxay ku sidbatay haadaan dheer oo ba’ iyo hoog leh. Waxayna tabaysaa halyeeyo u kacoo wax uun ka caynsha…malaha waxay tabaysaa hal-abuurkii iyo hawlkarnimadiisii …malaha waxay tabaysaa madiixiisii iyo maxaa wacaydii.
Tags: warar « Qoraalkii HoreQarax xoogan oo Ciidanka Ethiopia lagula eegtay Baladweyne	Qoraalka Xiga »AMISOM oo tababar-siinaysa saraakiisha booliska Soomaalida (Sawirro iyo muuqaal)	Halkan Hoose ku Jawaab